Hal meel oo reer Woqooyiga ka hoos baxsan ilaa 1991-kii marka ay Koonfurta ka hadlayaan! (Waa maxay?) | Hadalsame Media
Home Maqaallada Hal meel oo reer Woqooyiga ka hoos baxsan ilaa 1991-kii marka ay...
Hal meel oo reer Woqooyiga ka hoos baxsan ilaa 1991-kii marka ay Koonfurta ka hadlayaan! (Waa maxay?)
(Hadalsame) 16 Maajo 2020 – Marka laga hadlayo “Mar Kale Midnimo”, in badan oo ka mid ah bulshadayda Reer Waqooyi/Somaliland, waxa maskaxdooda ku soo horraysa oo ay is weydiiyaan ama ay ku weydiiyaan, “Ma Muqdisho oo gubanaysa ayay nagu wadaan”?
Marka ay sidaas leeyihiin, waxa igu soo dhacda in inta badan bulshada Waqooyi aanay midnimo Soomaaliyeed diiddanayn, se ay ka cagataaglaynayaan degganaan la’aanta iyo amniga aan sugnayn ee Muqdisho iyo meelo kale oo Koonfurta ka mid ah ka jira, sida qaraxyada is miidaaminta iyo dagaallada riiqda dheeraaday ee kooxda Ashabaab iwm.
Wax se bulshadayda Reer Waqooyi in badan oo ka mid ah ka maqan in iyagu xal raadinta ay ka mid yihiin oo uu xil weyni ka saaran yahay in ay ka qayb qaataan dejinta iyo soo gebagebaynta wixii Koonfur ka jira ee dhibaato ah, si amni iyo degganaansho loo wada helo, loo na samayn karo wax la wada yeesho (qaran iyo dawlad) dhaama kuwii inaga dumey.
60 sannadood ummad (dal) xor ahaa oo dunida ka mid ah, (1960 – 2020) ama aynu miyir-qabno ama aynu waallaano’e, ayaynu nahay. 60 jir haddana weli cayddi iyo carjow ah oo raad-barasho ku jira oo la ilaaliyo.
Cududda iyo xoogga, aqoonta iyo waaya-aragnimada, kartida iyo hufnaanta, halkarka iyo hawlkarnimada, hawraarta iyo hadalka, sama-doonnimada iyo xaldoonnimada, iyo waddaniyadda iyo daacadnimada labada bulsho (Waqooyi iyo Koonfur) oo la is la doontaa oo la isku beegaa, la isu geeyaa oo la mideeyaa, waxa ay noqon doonaan dhagax weyn oo marka la gujiyo keeni kara halabuur biyo fadhiya dhaqaajin kara.
“Even the weak become strong when they are united”.
Xitaa kuwa jilicsani waxa ay yeeshaan xoog marka ay midoobaan.
Waxaa Qoray: Maxamed Baashe Xaaji Xasan, xiriiriyaha dhaqdhaqaaqa Mar Kale Midnimo
Previous articleBBC oo heshay dokumentiyo muujinaya sida Soomaaliya, Kenya ugu kala aragti duwanyihiin dhegaysiga dacwadda badda
Next article”Insha Allah waan kulmaynaa dhowaan!” – Silvia oo Muslimiinta Talyaaniga u mahad celisey & ballan ay la dhigatay